Date My Pet » Nahita A Pet Sitter
amin'ny Therese Kopiwoda
Last nohavaozina: Mey. 25 2020 | 3 min namaky
Amin'ny manaraka ianao handeha, na noho ny raharaham-barotra na ny fahafinaretana, dia mety ho tianao ny handinika fandraisana mpiasa avokoa ny iray Pet mipetraka eo ho avy ao an-trano mba hikarakara ny biby fiompy. Nampiasa ny asa ny biby matihanina sitter no ahafahan'ny biby hijanona aina ao an-trano, manome fiadanan-tsaina ianao satria fantany ny soa aman-tany mahavita tanana, ary manafaka anao tsy niantehitra tamin'ny namana na havana. Alohan'ny manolotra ny fanalahidy ka ahevahevao veloma Rover sy Fluffy aza, maka fotoana mba hampianatra ny tenanao momba ny biby sy ny asa sitters dia manome. Haka am-bavany biby vitsivitsy sitters, hahafantatra azy ireo somary, ary mangataka fanontaniana. Fantaro ny momba ny zavatra niainany, ny matetika ireo mitsidika ny biby fiompy Ho, mandra-pahoviana fitsidihana farany, izay Ho raha mbola amin'ny biby fiompy, ny fomba hiatrehana Ho tampoka, ary ny saram. Ankoatra ny fampahalalana ankapobeny momba ny asa, ianao te-hanarona tena manan-danja vitsivitsy hevitra, araka ny voalaza etsy ambany.
– Fiantohana sy / na bonding: Izany dia tsy manakana ny loza tsy hitranga nefa dia hiaro anao sy ny biby sitter ho iray tokony ho mishap hatraiza mitranga. Hany indrindra proprietors no azo antoka, ary ny ankamaroan'ny asa izay mampiasa biby sitters dia bonded sy azo antoka. Tena hevitra tsara ny mangataka porofo ny fiantohana.
– Pet fepetra vonjy taitra: Raha ny biby marary, raha miala ianao, Ho zava-dehibe izany noho ny biby sitter hahalala izay handray fepetra raha toa ka tsy afaka ho tonga. Izy no manana ny fifandraisana ny vet vaovao, ary ny karazana fitsaboana sy / na oharina manome alalana anao raha tsy azo nifandray.
– Pet sitter fomba vonjy taitra: Anontanio hoe inona no fepetra ho raisina raha toa ny biby sitter ka marary ary tsy afaka mikarakara ny biby fiompy, raha toa ka tsy afaka mandeha any aminao an-trano noho ny inclement andro, na eo amin'ny zava-nitranga ny loza voajanahary.
– Key fiarovana: Anontanio ny fomba manan-danja ho fantatra sy voatahiry. Fanalahidy dia tsy tokony ho tia na inona na inona amin 'ny anaranao na ny adiresy ao amin'ny izany, ary rehefa tsy mampiasa, Ny tena tsara dia tokony ho azo antoka foana ao amin'ny mihidy hafa azo antoka, na azo antoka vala. Biby tena mipetraka orinasa dia manolotra ihany koa ny hitandrina ny fanalahidy ho an'ny ho avy biby mipetraka asa.
– Fifanarahana sy ny endrika hafa: Aoka ho azo antoka fa ny biby dia manome anao sitter amin'ny fifanarahana an-tsoratra manazava amin'ny antsipirihany mikasika zavatra toy ny daty, fotoana, asa nifanarahana, fomba vonjy taitra, fototra fiarovana, tahan'ny, sns.
– References: Mangataka ny anarana sy ny adiresin'ireo mpanjifany vitsivitsy. Makà fotoana hiresahana ireo olona ireo, ary manontany momba ny zavatra niainany sy ireo na tsia, fa tiako hanakarama biby manokana sitter indray. Maro koa ny biby sitters no faly izy ireo hanome andinin-tsoratra masina amin'ny fikarakarana biby hafa matihanina toy ny veterinarians, groomers, na ny mpampiofana.
– PET olana: Mampahafantatra ny te ho biby sitter ny misy olana ara-pahasalamana, fihetsika olana, na ny anton-javatra manan-danja hafa momba ny biby fiompy. Manome ny biby sitter fanazavana betsaka araka izay azo atao momba ny biby dia manampy azy mba hanome ny tsara indrindra azo atao fikarakarana.
– Home olana: Toy ny biby olana, aza hadinoina ny mampahafantatra ny biby sitter ny misy oddities momba ny trano izay mety hitranga eo amin 'ny tsy naha (trano fidiovana izay Safononoky, varavarana izay tsy manidy araka ny tokony ho, fiarovana alarms, etc.).
Satria biby nipetraka teo dia asa fanompoana manokana, ianao sy ny biby tokony hahazo aina ilay olona izay manasa ao an-trano. Mitady ny fahatsapana ny maha-matihanina amin'ny hihatra manokana, ataovy azo antoka fa tafiditra ao ny gut fihetseham-po, ary ny biby mandinika ny fihetsik'i ho anao ny biby sitter dinidinika. Tamin'ny kely ny fanomanana sy ny fanadihadiana, ny biby dia ho afaka nijanona soa aman-tsara ao an-trano izy raha mbola ianao, ary ho any mba mafy Manao veloma anareo amin'ny fitiavana sy ny firaiketam-po rehefa miverina.